Digital Twin - BIM + GIS - okwu ndị dara na Nzukọ Esri - Barcelona 2019 - Geofumadas
Mee, 2019 ArcGIS-ESRI, innovations
Egeomates e ekpuchi remote na ihu forms ọtụtụ ihe ndị metụtara isiokwu; Anyị na-emechi a 2019 quarterly okirikiri, na-aga n'ụlọ ESRI User Conference na Barcelona - Spain 25 April na ẹkenịmde ke Institute of Geology na Cartography nke Catalonia (ICGC).
Iji hashtag #CEsriBCN, na anyị akaụntụ twitter Anyị nyere mkpuchi banyere ihe omume a ebe, ma e wezụga ndị nnọchi anya Esri Spain, anyị nwere ike ịhụ ndị nyocha, ndị na-eme ihe nkiri na ụlọ ọrụ ndị na-eji sọftụwia ugbu a. Modesto, ma e jiri ya tụnyere ihe omume ndị ọzọ ebe anyị sonyere na mbụ, ihe omume ahụ enweghị mmerụ na nhazi, butere ụzọ na nkwupụta na ndị na-eweta ya. N'ozuzu, e kewara usoro ahụ n'ime tebụl abụọ n'otu oge, nnọkọ ọnụ na ngosipụta ahụ lekwasịrị anya na ozi ArcGIS Enterprise, njikọ aka na SAP, AutoDesk na Microsoft.
N'okpuru ebe a, anyị na-achikota akụkụ ndị weghaara uche anyị ọtụtụ n'ime usoro Geo-engineering.
N'ọdịnihu anyị na-aga ọnụ ...
Site na mbido ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, a na-atụle tebụl okirikiri ebe a tụlere isiokwu ndị dị ka njikọta nke BIM na Artificial Intelligence (AI) metụtara GIS. Nke a bụ Martí Domènech Montagut duziri ya na Corpolọọrụ Teknụzụ na Ngalaba Ọrụ, Ilse Verly na-anọchite Autodesk na Xavier Perarnau si SeysTic. Karịa ihe na-adọrọ mmasị n'ihi mkpa isiokwu a dị, nke na-ebugharị ndị nrụpụta ngwanrọ na ngwaike maka Geo-engineering. Hụ isiokwu BIM n'ụdị nzukọ ndị a, nke a na-elekwasị anya na mpaghara ala, ma BIM na ọgụgụ isi na ụmụ ejima dijitalụ, na-enyere aka hụ ọdịnihu nke ihe ngwọta ga-abụ ngwugwu na-agbakwunye na ntanetị ebe onye ọrụ ga-eji ihe kachasị mma. ngwaọrụ, ma nke nweere ma nkeonwe mana n'okpuru usoro mpaghara nke ejikọtara na usoro mmepụta. Ọnọdụ ESRI akara nke ọma, n'ịnọgide na-ewulite njikọ aka nke na-ekwe ka mmekọrịta nke ọtụtụ teknụzụ, ọnọdụ anyị na-atụghị anya na BIMSummit 2019 nke mere ebe a na Barcelona, ​​ebe ụlọ ọrụ ole na ole kwuru banyere ihe ha na-eme ka ha ghara ịhapụ nke Ọnọdụ gbasara ohere gbasara ọnọdụ nke ihe owuwu - usoro ndụ ndụ (AECO).
N'ịchọ ọdịnihu na 4ª Industrial Revolution, mkpa nke GeoSpatial Cloud.
Mgbe welcome site Jaume Masso, Director nke Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), malitere ihe na-akpali aka Angeles Villaecusa - Director General na ESRI Spain, mebiri na ice na a kemmeochi video na-egosi amaghị nke ihe ọ bụ n'ezie, iji na ngwa nke GIS. Ọ nke jocular, na video na-eme ka o doo anya na a Geographic Ozi System karịrị a ngwá ọrụ na-eji nditịm maka nkewa.
Ihe ngosi ahụ nke akpọrọ Esri GeoSpatial Cloud: Na-akpali ọdịnihu na 4th Industrial Revolution, iji mee ka a mara mkpa GeoSpatial Cloud dị na ebumnuche nke arụmọrụ, ịdị irè na mwekota nke na-akpali ụlọ ọrụ n'ozuzu mana nke ahụ maka ọnọdụ anyị na-aka akara SmartCities echiche.
Villaescusa, gosiri ndị na-eso ụzọ na e nwere ndị na-eji ngwaahịa na ọrụ ESRI eme ihe na ọtụtụ ndị amaghị, dị ka Ụlọ ọrụ Walt Disney, nke na-eji GIS eme ihe ngosi nke obodo nke ihe nkiri ha, na-eme ka ha bido nso ha n'eji data data eme ihe.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla metụrụ ha aka ịhụ animated fim, m nwere ike ịgwa gị na m na-amaghị ESRI si na ọgwụgwụ Ebe e si nweta nke film The Incredibles, na amaghị na ndị ọhụrụ version nke Agụba na-agba ọsọ ESRI keere òkè n'ịkpụzi na ihe nkiri.
Eziokwu bụ na kwa ụbọchị ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-achọ ka ha jiri data geospatial rụọ ọrụ ha, maka nhazi ihe nhazi, nyochaa usoro ahụ, ma mesịa chịkwaa ọrụ ahụ. Nke a bụ ihe mere ntinye anya nke atumatu ndị mebiri nchịkọta nke data dị ka SAP ma ọ bụ HANA, bụ nke na-eme ka anya ha chee ihu na mbara igwe, abụghịzi ihe ijuanya.
Akụkọ ArcGIS Platform Key
Aitor Calero, bụ ọkachamara maka Technology na Innovation nke Esri - Spain, kwuru ihe ga-abịa n'ọdịnihu dị nso maka usoro ArcGIS. N'okwu ya, ọ kọwara otú ngwá ọrụ ndị ọhụrụ nke ezinụlọ ESRI nwere ike isi nye onye nnọchiteanya ọnụ ahịa maka nkwalite nke SmartCities na Digital Twins (Ụmụ ejima abụọ).
Ọ malitere site na arụmọrụ nke ArcGIS Hub, ihe atụ nke nhazi na nhazi mpaghara na 3D na Urban maka ArcGIS, nke na-akwado ruo n'ókè ụfọdụ nke ịmepụta ejima ejiri. Ọ gosipụtara ngwá ọrụ nke cadastre ime ụlọ na ArcGIS Indoors - site na ngwá ọrụ a, ọ ga-ekwe omume iji map 2D na 3D, nyocha anya na nhazi zuru oke na njikwa ihe onwunwe.
Tụkwasị na nke ahụ, o gosipụtara ịrụ ọrụ dịka Tracker maka ArcGIS. Ngwaọrụ ikpeazụ a maka nlekota nke ndị ọrụ na-arụ nyocha n'ọhịa, inwe ike ịkekọrịta ọnọdụ ha, nwere ike ịhụ ọhụụ nke mkpuchi na onye ahụ na-arụ ọrụ na mpaghara a chọrọ. Ọ na-arụ ọrụ na ngwaọrụ gam akporo na iOS, yana atụmatụ dị mfe maka onye ọrụ ahụ, a pụkwara ịhazi ya maka ịntanetị jiri ya. Ngwa a nwekwara ikike nlekota oru na ọrụ iji chekwaa na jikwaa ọnọdụ ebe; eji BigData Store ohere ohere.
Calero, nyere nkọwa dị mma nke ihe ESRI nyere n'afọ a na ndị na-abịa; na Geofumadas anyị ga-eche, ịnwale ma gosipụta ikike ha nwere.
Iji na-eme njem iji nweta data ruru eru nke ụmụ amaala - Case Aparcabicibcn
Ihe ngosi a, dị nnọọ mma, na-elekọta Camila González, onye ọrụ nchịkwa nke Ụlọ Ahịa nke Oge, gosipụtara otú usoro ihe ọmụma si enyere aka ịnakọta data banyere ụlọ ma ọ bụ ihe omume nwere mmetụta dị elu. N'okwu a, anyị na-ekwu maka ebe ndị na-adọba ígwè ígwè, nke, dị ka ọ dị na Barcelona, ​​na-anọchi anya ụzọ dị mkpa nke njem, gụnyere ọrụ ịgbazinye ígwè.
Gonzáles kọwara otú, itinye akwụkwọ mkparịta ụka, nnukwu data qualitative si n'obodo ukwu nwere ike nweta nke ọma. Nke a na-agbanwegharị n'ime mmepụta nke ikpo okwu na-emeghere onye ọrụ ahụ, onye nwere ike igosi nkwenye ha tupu iji ọrụ ahụ.
Dị ka nchekwube dị ka ọ dị, ime ka ndị mmadụ na-achọsi ike ka ndị ọrụ, na nlekota nchịkwa nke State, iji hụ na a ga-ekesa mmeghe data, na mgbakwunye na ịmepụta ngwa maka mfe na njikwa. Ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na-enwe olileanya iji nweta na njedebe, otu ikpo okwu ma ọ bụ usoro nke na-egosi na nnweta / visibilụ nke ụgbọala na-ebu ígwè, ọ bụrụ na ojiji ya dị mma maọbụ ọ bụrụ na ọnọdụ ya arụ ọrụ; ma maka ịme mkpebi banyere usoro ihe eji eme njem njem, na maka ihe ngwọta nye onye ọrụ njedebe.
N'enwe uche anyị, nkwupụta okwu ikpe ọkụ, ArcGIS Enterprise na Bombers de Barcelona, ​​gbanye GIS na oge oge, eduzi site na Miquel Guilanya. Tècnic GIS. SPEIS - Bombers de Barcelona, ​​bụ onye kọwapụtara n'ụzọ zuru ezu otú ọ ga-esi kwe omume ịmepụta usoro ihe ọmụma / usoro ihe ọmụma n'oge na-adịghị anya, maka igbochi na nzaghachi ozugbo na ihe omume ma ọ bụ ọnọdụ ọjọọ.
N'ozuzu, ihe omume ahụ na-atụ anya atụmanya, na-aga n'ihu iji gosipụta ozi dị mkpa, mmasị ndị bịara ya; yana nkwado nke njikọta niile nke enwere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na ngosi nke akụkọ ihe ịga nke ọma na mmelite nke ngwa ESRI. N'ịbụ ihe omume na Barcelona, ​​ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ akwụkwọ dị na Catalan; enweghi ike na nke a nwere ike ịnye ndị ọrụ na-anaghị asụ ya.
Previous Post«Previous Ebe nrụọrụ weebụ nke map ndị dị na mbụ n'etiti Mpịakọta Maapụ 28-124
Next Post Gwa data CAD na GIS na ArcGIS ProNext »